Debian 11 "Bullseye" ikozvino inowanika neLinux 5.10 uye akawanda matsva maficha | Linux Vakapindwa muropa
Saka uye sezvazvaive zvakagadziridzwa, Debian 11 Bullseye yakaburitswa uno Mugovera, Nyamavhuvhu 14. Iyo yapfuura vhezheni yaive iyo 10 mabhasi iyo yakasvika muna Chikunguru 2019, uye kubva nhasi nhanho nyowani inotanga iyo inounza maficha matsva ezvese zvinhu, asi muDebian maitiro: anochengetedza kupfuura mu, semuenzaniso, mwanakomana waanodisisa, anova Ubuntu, uye zvakanyanya kupfuura mumasisitimu anoshanda ne Rolling Regedza yekuvandudza modhi. Ihwo uzivi hwavo, uye ndicho chikonzero nei iyi sisitimu inoshanda iri yakasimba uye yakasimba.
Kuvhurwa kwakarongerwa nhasi, uye mangwana kuSpain vanga vachigadzirira zvese. Mifananidzo yacho yakaiswa imwe nguva zvisati zvaitika, zvadaro, uyezve vanochengetedza vakasimbisa kuti zvese zvafamba mushe vasati vazivisa kuvhurwa. Nguva iyoyo yatouya pasocial media, uye iyo Debian 11 simaki ikozvino inogona kutorwa. Pane iro zita uye senguva dzose, ihunhu kubva kuToy Story saga, mune ino bhiza mamvemve.
Debian 11 Bullseye Zvinoratidza
Inotsigirwa kusvika muna 2026, LTS kubva muna 2023.
Yakagadziridzwa madhesiki. Mazhinji ezvinyorwa zvakajairika zvakabatanidzwa kune ino poindi uye kune yapfuura, iyo nucleus:
Zvikamu LXQt 0.16.
Native rutsigiro rwe exFAT.
Kudhiraivha isina kutyaira kunowedzerwa kumadivaysi eUSB neiyo nyowani "ipp-usb" package.
Mutsva murairo yakazaruka inowanikwa seyakanaka alias ye xdg-yakavhurika (default) kana run-mailcap, inochengetwa neiyo yekuvandudza-dzimwe nzira system. Iyo inoitirwa kushandiswa kwekudyidzana pamutsetse wekuraira, kuvhura mafaera neayo default application, iyo inogona kuve graphical chirongwa kana ichiwanikwa.
Systemd ikozvino inogonesa ayo anoramba ari magazini mashandiro nekutadza, kuchengetedza mafaera ayo mu / var / log / journal /.
Nyowani default password hashi fomati "yescrypt".
Yakagadziridzwa akakurumbira mapakeji:
SUNGIRA DNS Server 9.16
GNU Compiler Unganidzo 10.2
Zvinopfuura 59.000 mamwe akagadzirira-kushandisa-pakeji.
Vashandisi vanofarira, vandinofungidzira kuti havazove vashoma, vanogona ikozvino kurodha Debian 11 Bullseye kubva ku rakasimba davi server yeprojekti, inowanikwa pa Iyi link. Debian 10 yakaendeswa ku "oldstable" sezvo icharamba ichitsigirwa kusvika muna 2024, asi haisisiri mutsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 11 Bullseye ikozvino inowanikwa neLinux 5.10, GNOME 3.38, Plasma 5.20 uye mazhinji akagadziridzwa mapakeji
selestino ortix akadaro
uye isa gnome 40 pairi, gadzira zvakanaka
Pindura kuna selestino ortix
Cesar Yanez akadaro
Hazvigoneke kumisikidza nekuda kwematambudziko neiyo komputa firmware! Kana vanhu veDebian vakagadzirisa zvinhu izvi vangangoshandisa iyi OS! Zvinofanira kujekeswa kuti handisati ndambove nematambudziko ekuisa Ubuntu uye zvigadzirwa….
Pindura kuna Cesar yanez
Ndiko nekuti Debian nekumira chete ine MAHARA SOFTWARE uye pamwe komputa yako inoda isina-yemahara firmware yezvimwe zvinhu kuti zvishande.
Kurega, chirongwa cheDebian chinonyanya kudzvinyirira neisina-yemahara firmware, iwe unofanirwa kurodha iyo isiri yemahara mufananidzo unosanganisira madhiraivha ehurhare yako. Iyo imwechete inosimudza inowanzo kuraira kuti iwe unoda mamwe mapakeji.
Pindura kuna Azton
jonathan sanchez akadaro
Vhura iyo terminal uye nyora su (inokukumbira iyo password password) wobva wanyora nano / etc / sudoers (iwe uchagadzirisa mvumo faira yeiyo sudo raira) ipapo pazasi apo panoti "mudzi ZVESE = (ZVESE: ZVESE) ZVESE "pfugama pasi wonyora zita rako rekushandisa unoripa nzvimbo uye wozonyora ZVAZVO = (ZVESE: ZVESE) ZVESE wozochengeta iyo faira ne ctrl + x izvozvi unenge uine Sudo, zvino nyora Sudo nano /etc/apt/source.list ( inokumbira iwe password yeako mushandisi) mune iyo faira faira, tsvaga mitsara yese inoguma main, ipe nzvimbo uye unyore don-non-yemahara, zvaizotaridzika chaizvo seizvi: deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main don isiri-yemahara (uyu muenzaniso) uye iwe unofanirwa kuzviita mumitsara yese inoguma main, wozoichengeta ne ctrl + x wobva wanyora Sudo apt kugadzirisa (kurodha zvakare zvinyorwa) uyezve nyora Sudo apt gadza firmware-linux -nonfree (neizvi uchaisa PRIVATIVE KANA KUTI KWETE YEMAHARA firmware) kana iwe wapedza kuisa, tangazve komputa uye ipapo uchave uine anodiwa madhiraivha.
Pindura kuna Jonathan Sanchez